Geoinformatics Maarso, wuxuu sii wadaa GIS Open - Geofumadas
Geoinformatics March, Open GIS ayaa sii socota
Maarso, 2009 Geospatial - GIS, qgis, topografia
Wargeyska The Geoinformatics ayaa horey u soo muuqday, taas oo muuqaalkeeda ka muuqata sawirada satellite-ka ah ee laga soo xigtay Iiraan oo ka soo jeeda koonfurta Iran iyada oo shaaca ka qaaday in maqaalkan lagu qoray adeega shirkadda Jarmalka GeoServe. Inta badan, waxay sii wadaysaa sii wadida mowduucyo hore loo taabtay waxaanan ku faraxsannahay in isbeddelka ugu yaraan sannadkan ay muujinayaan tiknoolajiyada ilaha furan ee loo adeegsado GIS si aad ah u cad; Bishii la soo dhaafay waxay ka hadlayaan gvSIG oo hadda waxay diiradda saaraan qalabka kale sida Quantum GIS iyo Calypso.
Xaqiiqda sare ee qabashada sawirada laga soo qaaday mashruuca FLI-Map 400.
Akhrinta lagugula taliyay, oo muujineysa inta aad fogaan karto (ama aad sigaar cabbi karto) adiga oo adeegsanaya farsamooyinka farsamooyinka barafka loo yaqaanno LiDAR.
Codsiyada gps si ay ula dagaallanto Graffiti
Qormo ballaadhan oo na tusaya faa'iidooyinka barnaamijkan furan ee asalka jarmalka laga codsaday hirfoolojiga.
booska Interesting by Sebastian Benthall in ku hadla ee wadarta qaybaha on GIS u furan il codsatay in ay teknoolajiyada GIS iyo sida aad ku gaari karto heer wanaagsan isticmaalaya codsiyada sida PostGIS, GeoGerver, GeoWebCachey OpenLayers.
In qaabka hore ee gvSIG, taariikhda, taas oo ah oo aanu samayn qalab this in ilaa taariikhda waxaa loo arkaa dad badan sida ugu badnaa oo isbedelka furan ee arrinta.
Waxaa intaa dheer waxaa jira mawduucyo kale sida:
Mahadsanaanta GLONASS, cusbooneysiinta GNSS
Warbixinta shirkadda ScanEx
Ku sii socoshada sahaminta kooxaha waxqabadka leh, waxay dib u eegaan qalabka qabashada Magellan ProMark 500 GPS, waxaa lagama maarmaan ah in la akhriyo tixgelinta in habka maqaalkeedu yar yahay aan loo yeedhin "mustaqbalka"
Maxaa Mapinfo keeno
Tani waa wareysi lala yeeshay wakiilada Pitney Bowes oo ka hadlaya barnaamijka cusub iyo qaybta cusub ee loo tixgelinayo ka dib markii iibsigii ugu danbeeyay.
Waxaa sidoo kale jira waxyaabo xiiso leh oo ku saabsan mashiinada oo dhan oo loo yaqaano Toughbooks.
Wareysiyo kale oo aan ku-talogal ahayn:
Qiyaasta ugu weyn ee muuqaalka Cyclomedia
Sida had iyo jeerba, James Fee wuxuu wax qoraa wax yar laakiin waa qadarin, kiiskan ku saabsan qaadista falanqaynta miisaanka ee miiska isticmaalaha.
Gebogebo, akhris heer sare ah sida laga filayo Geoinformatics, halkan waa qaybta internetka ee loo bedeli karo pdf oo laga soo dejiyey degaanka.
GPS GvSIG OS majallado
Post Previous«Previous Xayaysiiska kuwa waaweyn ee Geo
Post Next Gofumed on digaNext »